Lozam-pifamoivoizana tao Ambatolampikely : Nipotsaka ny atidohan’ilay zazalahy 14 taona -
AccueilSongandinaLozam-pifamoivoizana tao Ambatolampikely : Nipotsaka ny atidohan’ilay zazalahy 14 taona
Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina namoizan’ain’olona indray tany amin’iny lalam-pirenena faharoa iny ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 04 ora maraina. Zazalahy 14 taona no lasibatra tamin’izany teo Ambatolampikely, fokontany Masombahiny, kaominina Ambohimalaza Miray. Vokatry ny voina nahazo azy, dia nipotsaka mihitsy ny atidohan’ity niharan-doza ity. Raha ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia nitari-dositra nitsoaka ary mbola tsy hita popoka ny mpamily nahavanona izao fahafatesana izao. Ny loharanom-baovao ihany koa no nahafantarana, fa nihazakazaka maraina sy nanao fanatanjahantena teny an-toerana io tovolahy mpianatra mipetraka ao amin’ny fokontany Andranosoa io, tsy lavitra ny toerana nisehoan’ny loza io no nodomina sy nohitsahina fiara tsy fantatra avy any Toamasina hiakatra ho aty Antananarivo. “Raha ny voalaza, dia nisy namany niaraka taminy ihany, saingy tsy nisy nahita ny nahavoadona azy. Tamin’ny 05 maraina vao niantso zandary ireo olona nahita ny razana ka izay izy ireo vao nidina teny an-toerana. Teo ihany koa vao fantatra fa nodomin’ny fiara io zazalahy io”, hoy ny fanazavana avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena.
Rehefa nanao ny fanadihadiana teny an-toerana ireo mpitandro filaminana nandray an-tanana ny raharaha, dia nisy tamin’ireo olona no nilaza fa kamio kely no nandona sy nanitsaka io ankizy lahy io. Tsy nisy sahy nijoro vavolombelona amin’ny tena fahamarinan’izany anefa ireto farany. Na izany na tsy izany, dia teo noho eo ihany dia nandray fepetra tamin’ny fampilazam-baovao faran’izay haingana tamin’ireo toby manodidina ireo zandary, ary samy nanao fikarohana io fiara io avokoa taorian’izay. “Nosakanana daholo izay fiara semi-remorque nankany Andoharanofotsy, ireo izay nizotra niakatra an’ Antananarivo sy nandeha Moramanga, hatramin’ireo fiara nijanona teny By Pass hijerena sy hanaovana fikarohana saingy tsy nahitana na inona na inona”, hoy hatrany ny fanampim-panazavana avy eo anivon’ity vondron-kery ity. Mbola maizina tanteraka noho izany ny mahakasika ity raharaha ity, saingy miankina amin’ny fakana am-bavany ny fianakavian’ny maty, hahafahana mamantatra ilay namana niaraka tamin’ny zanak’izy ireo, izay inoana fa mety nahita ilay fiara nahavanon-doza, no hahitana ny marina. Mbola mitohy noho izany ny famotorana sy ny fikarohana.
Nandritra ny kabary izay nataon’ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina manoloana ny Malagasy rehetra amin’ ny fahazoana ny taona vaovao izao ny fanetren-tena goavana manoloana ny vahoaka izay nanome fahefana azy, “ betsaka ny efa vita, ...Tohiny